Loogu talagalay dadka isticmaala istuudiyaha muusikada | Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka ee Ota Ward
XNUMX. XNUMX.Xaddidaadda tirada isticmaaleyaasha
Waxay noqon doontaa XNUMX% awoodda qol kasta.
XNUMX.Tallaabooyinka ka hortagga infekshanka aasaasiga ah
Fadlan qaado talaabooyinka kahortaga cudurka soo socda kahor intaadan isticmaalin.
aasaas ahaan"XNUMX. Codsiyada isticmaalka" ee "Ku saabsan adeegsiga xarumaha"Sida laga soo xigtay.
Si looga hortago infekshinka dheecaanka, fadlan ilaali masaafada u dhexeysa dadka isticmaala iyo ku celceli adigoo wajahaya darbiga si aysan isu wajihin.
Si looga hortago infekshannada taabashada, ka fogow inaad dad badan la wadaagto qalabka sida ugu macquulsan.Intaas waxaa sii dheer, markaad wax wadaagayso, fadlan jeermi-dilaha isticmaalaha si taxaddar leh.
Haddii ay adag tahay in la xidho maaskarada, sida marka laylisyo heesaha ama qalabka dabaysha, waxaa suurtagal ah in laga hortago infekshinka lagana hortago maaskaro.Si kastaba ha noqotee, hubso inaad xirato maaskaro inta lagu jiro nasashada.
Isticmaal marawaxad weyn oo lagu rakibay istuudiyaha 30 daqiiqo kasta illaa 1 saacadood kasta, fur albaabada, oo hubi inaad qolka bannaanka u neefsato.
Fadlan isla markaaba bax ka dib dhammaadka isticmaalka.
Suurtagal maaha in la joojiyo qaboojiyaha, oo ay ku jirto joogsiga ku meelgaarka ah.
XNUMX. XNUMX.Hubinta caafimaadka martida
Qofka mas'uulka ka ah isticmaalka kooxdu waa inuu hubiyaa xaaladda jireed ee kaqeybgalayaasha oo uu ku cabbiraa heerkulbeegga heerkulbeeg aan la xiriirin (kiro ayaa la heli karaa haddii loo baahdo).Haddii kaqeybgale kasta uu leeyahay astaamo sida qandho, qufac, ama cune xanuun, fadlan iska ilaali kaqeybqaadashada kuna dhiiri geli inay guriga ku noqdaan.Fadlan samee liiska kaqeybgalayaasha (magaca, macluumaadka xiriirka, iwm.) Oo xafid wakhti go'an.
XNUMX.Horumarinta deegaanka xarunta by ururka
Waxaan diyaarin doonnaa marawaxad weyn oo loo isticmaalo hawo qasabka ah waxaanan dhiirrigelin doonaa isticmaalkeeda.
Waxaan kuu sheegi doonaa waxyaabaha la codsaday, sida soo dhigista "codsi loogu talagalay dadka isticmaala xarunta" istudiyaha.
Waxaan idinka raali galineynaa cillad kastoo dhacday oo aan qadarinay fahamkiina iyo wada shaqeyntiina.